भारतबाट भित्रिने नागरिकहरूलाई राहत वितरण – इन्सेक
भारतबाट भित्रिने नागरिकहरूलाई राहत वितरण
बाँके ०७७ जेठ १५ गते
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगायत सङ्घ सस्थाको सहयोग तथा इन्सेक नेपालगञ्जको समन्वयमा जेठ १४ गते भारतबाट भित्रिने नागरिकहरूलाई राहत वितरण सुरू गरिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणले विकराल रुप लिन थाले पछि भारतका विभिन्न शहरमा काम गरेर फर्किने नेपालीहरूका लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय नजिकै राहत वितरण गरिएको हो । राहत वितरण जेठ १४ गते देखि सात दिनसम्म गरिने र आवस्यक परे थप गर्न सकिने डा. नितेस कनोडियाले बताउनु भयो । टाढाबाट आएका नेपाली नागरिकहरू भोकभोकै हिड्न नपरोस भन्ने उद्देश्यले राहत वितरण गरिएको डा. कनोडियाले बताउनु भयो ।
हरेक दिन नेपालगञ्ज भन्सार नाका हुदै करिब १७ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा आउने गरेका छन् । उनीहरू सबैलाई सात दिनसम्म विस्कुट, चाउचाउ र पानी, प्रदान गरिएको छ ।
कोरोनाको महामारीमा मनकारी हात यसरी जोडिएर राज्यलाई सहयोग गर्नु गर्वको कुरा भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरी प्याकुरेलले बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश ५ को संयोजक भोला महतले उहाँले कोरानाका कारण नोकरी गुमाएर खाली हात फर्केकाहरूलाई यस कार्यले थोरै भएपनि राहत महसुश हुने बताउनु भयो ।
राहत वितरण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी विरबहादुर ओली, सशस्त्र प्रहरी का एसपी दिपक अधिकारी, पत्रकारहरू लगायतका सहभागिता रहेको थियो ।